Cali Coomey Ma Duugowdo Taariikhduye … Lagama Sineysto | Kaafi News
Cali Coomey Ma Duugowdo Taariikhduye … Lagama Sineysto
hawlgalku waxa uu ku waajahnaa gurmadka iyo kaalmeynta dadkii ku noolaa goobihii gaajadu halakeysey oo kaliya. Xataa Puntland goboladeeda
Anigoo tix raacaya qoraal aad shabakada Hadhiwanaag soo dhigtey 08/01/2019, oo aad rabtey in aad Ahmed Guruurje ku boorisid hubsasho, ayaad adigu bohol taariikh cad oo shaley aheyd weydaaratey.
Waxaad isku booshaaqdey dhacdooyin kala duwan oo marxalado kala duwan dhacay aad u sibir saartey sidaad rabtid, iyadoo ay ka muuqato majaro habaabin.
Waxaan qalinka uqaatey oo aan dadweynaha la wadaagayaa xogtaad arinka in dawladii Madaxweyne C. Raxmaan Ahmed Cali AHN ay (500) askari ay codsatey ka codsatey hawlgalkii nabad ilaalinta ee UNISOM.!!!!!!
Hadalka oo kooban may jirin, waxaana kuu daliil ah:
(1) hawlgalku waxa uu ku waajahnaa gurmadka iyo kaalmeynta
dadkii ku noolaa goobihii gaajadu halakeysey oo kaliya. Xataa Puntland goboladeeda, soomey gaadhin marka laga reebo koox farsamo oo wadooyinka Boosaso hagaajisey oo Italy kasocotey.
(2) Madaxweyne C.Ramaan waxa uu BBC-da ka sheegey ta English-ta iyo laanta Af-somaliga ah, isagoo ku sugan dalka Sacuudiga in Somali Land aaney jirin wax macaluulaya, hadii ay ciidan yimaadaana waxaanu u qaadaneynaa in dagaal nalagu soo qaadey.
(3) Air-port ka Hargeysa Iyo Dekada Berbera waxay gacanta xiligaa waxa uu ugu jirey garabkii taabacsanaa dawlada Somaliland, waliba labadaba diyaaradaha iyo dhoofinta xooluhuba si habsami leh bey uga socdeen. Taas oo aan keensaneyn in ciidan shishiiye la keensado.
(4) James O. C Jonah oo ah ergeyga UN secretary General kala Taliyaha siyaasada arimaha Africa una dhashey dalka Sierra Leone, Somaliland waxa uu yimid Febuary 1992, halkaas oo uu kula shirey kusimihii madaxweynaha ahna kuxigeenka Somaliland Xasan Ciise Jaamac. Halkaasoo dadweynaha kula Hadley oo uu Xaaji Cabdi Waraabe dadku u doorteen in uu matalo, Xasan Ciise na uu tusayey in dadweynuhu goaanka gooni isu taaga lahaayeen. Halka ay UNISOM aheyd bilawgii 1993.(World Peace Foundation, Fletcher School, Tufs University)
(5) Shirweynihii Boorama, waxa uu ka dhashey heshiiskii Sheekh ee Tawfiiq ee ahaa June 1992, in lixbilood ka dib shir la iskugu yimaado oo laba sii asteeyey. Iyadoo ay bilaabmatey shir gogosheeda ay laheyd xukuumadii C.Raxmaan Ahmed Cali, gudoomiyana ka ahaa Wasiirkii Arimaha Dibada Sh. Yuusuf Sh. Cali Sh. Madar… oo siyaasiyiinta mucaaradka lagula kulmiye jirey oo xiligaa gadhwadeen ka ahaa Siilaanyo.
(6) Admiral Johnathon Hawe (9 March 1993-Febury 1994), waxa uu ahaa ergeyga khaaska ah ee UN Somalia isagoo badaley Ismat Katani oo Iraqi ahaa, hargeysa hal mar oo kaliya ayuu yimid oo uu saacado joogey, maney aheyn mid uu Madaxweyne Cigaal maalmo la joogey si uu wax uga dhageysto.
(7) Sababta Cigaal UNISOM ta u eryey waxay aheyd in Cigaal ka codsadey in ciidanka lala dhiso, kadibna ay balan qaad UNISOM siisey, hadana kaga baxeen, waa sida Madaxweyne Cigaal kaga garnaqsadey wareysigii BBC laanta Afsomalila, isagoo ku tiraabey in deyn dhawr malyuun oo Dollar ay galiyeen.
(8) Dr. Butrus Butrus Ghali, arinta Somalidu saameyn kumey laheyn eridiisa,ee waxay ka kacdey, duqeyn diyaaradaha isreal u geysteen, xerada qaxootiga Qana kuna taal dalka Lubnan oo dad badan oo rayid ahi ku naf-beeleen, ayuu soo bandhigey golaha loo dhanyey ee UN ka general Assembly, halkaas oo Israel cabaareyn iyo waji gabaxba kala kulantey, Mareykankuna ka codsadey in warbixintaas aanu horkeenin golaha guud ee UN. Arin Cigaal qoreyna saameyn kumey laheyn, hadii laga tagi waayana, waxa Marxuun Cigaal ku eedeyn jirey General Jamac Maxamed Qaalib in uu yahey wakiil qarsoon oo Butrus Ghali leeyey.
Maxamuud Biixi Axmed